Karazana spurs sy ny fampiasana azy amin'ny soavaly | Soavaly Noti
Karazana spurs sy ny fampiasana azy amin'ny soavaly
Jenny monge | | Fitaovana soavaly, soavaly
Spurs dia fitaovana iray izay azo ampiasaina amin'ny fifehezana equestrian rehetra. Izy ireo dia karazana spike metaly izay nalahatra tamin'ny voditongotry ny baotin'ilay mpitaingina azy mba hanampiana anao hitarika ny fihetsiky ny soavaly.
Tena ilaina ny mahafantatra ny fomba sy ny fotoana hampiasana azy ireo sorohy ny fanararaotana azy ireo and of ny soavaly mety haratra. Ho an'izany, misy fitsipika sasantsasany na amin'ny endriny na amin'ny fampiasana azy.
Azontsika jerena ve ny karazana spurs misy sy ny fomba fampiasana azy?
Mahaliana ahy ny manokatra an'ity lahatsoratra ity miresaka momba ny raha spurs dia ilaina na tsy ilaina. Raha ny hevitro tsia ny valiny izy ireo dia. Raha marina izany ny fampiasana azy ireo araka ny tokony ho izy dia mety ho fitaovana manamora ny asan'ny mpitaingina azy ary afaka manatsara ny fifandraisana amin'ny soavaly izy ireo.
Tokony ho mazava tsara fa ny spurs tsy tokony hanisy ratsy ny bibintsika izy ireo, tsy endrika sazy ka noho izany dia tokony hampiasaina am-pitandremana. Hetsika marina sy miafina no tsy maintsy atao mba tsy handaka ny soavalintsika.
1 Ny ampahany amin'ny spurs
2.1 English spur
2.2 Mandrosoa tantanana
2.3 Mamporisika ny baolina
3 Karazana akoho sy fampiasana
3.1 Ny akoho fohy
3.2 Ny akoho afovoany
3.3 Ilay akoho lava
4 Fampiasana spurs
4.1 Ahoana ny fampiasana azy ireo?
Ny ampahany amin'ny spurs
Misy singa 6 izy ireo. ny Arco, antsoina koa hoe ny vatana, izay ilay faritra miolakolaka mifanentana amin'ny voditongotr'akanjo mitaingina. ny tongotra, izay ireo faritra midina amin'ny sisin'ny baoty. ny andilany, izay ilay tady mitazona ny taolana amin'ny tongotr'ilay mpitaingina azy. ny bokotra izay manatevin-daharana ny tadiny sy ny tsipika. ny slice na roulette izay no itendrenao ny soavaly hanosika azy. Ary farany ny akoho, pigüelo na pihuelo, izay ilay ampahany nitazomana ilay roulet, na mihodina na tsia.
Rehefa misafidy spur dia tena ilaina ny mahafantatra ny fahasamihafana misy amin'ireo izay misy kodiarana mihodina sy ireo izay tsy manana. Manoro ireo voalohany aho nanomboka roulette mihodina, manakana azy tsy hanindry ny hoditry ny soavaly sy handatsa, hahatonga azy io malama kokoa noho ny iray izay tsy mihodina izay ahafahantsika mandratra mora foana ny bibintsika fa tsy amin'ireo mihodina.
Afaka mahita karazana spurs isan-karazany isika:
Vita amin'ny vy tsy misy fangarony ary manana habe samihafa arakaraka ny halavan'ny akoholahy. Ny loha dia mahitsizoro miaraka amin'ny sisiny malama sy boribory. Afaka mahita karazana spurs anglisy izahay:
Mamporisika ny baolina anglisy: mety azo ahodina ny baolina
Mandrisika amin'ny roulette ny anglisy: Izy io dia matevina sy mafy kokoa, vita amin'ny kodiarana roulette miaraka amin'ny kapila mihodina.
Mamporisika ny kintana anglisy: Io ilay misy ny kodiarana roulette fa manana nify fa tsy malama.
Vita amin'ny vy na rubber. Ny akoho dia matetika manodidina ny 20 mm. Ny loha dia fisaka sy mahitsizoro.
Mamporisika ny baolina
Vita amin'ny nikela misy famaranana miendrika baolina.
Karazana akoho sy fampiasana
Roosters mety mahitsy na miolaka, izany hoe, afaka manondro midina na mankamin'ny soavaly izy ireo. Ho fanampin'izay, miankina amin'ny halavany sy ny fampiasana azy dia mahita karazany telo isika:
Ny akoho fohy
Karazana akoho izy io ampiasaina amin'ny fifehezana ny soavaly fitondra mitsambikina. Izany dia vokatry ny zava-misy fa ny vatan'ny mpitaingina dia manakaiky ny an'ny soavaly ary noho izany ny akoho dia tokony ho fohy (15 mm) ho tsara ho an'ny mpitaingina sy ny biby.
Matetika izy io dia ampiasaina hanentanana ny soavaly alohan'ny hitsambikina.
Ny akoho afovoany
Ilay iray izay mazàna ampiasaina amin'ny fomba ankapobeny. Sahabo ho 20mm ny halavany ary mety ho an'ny olona salantsalany rehetra.
Ilay akoho lava
No ampiasaina ho an'ny akanjo, indrindra ho an'ireo lava lava. Mirefy 30 mm eo ho eo ny refiny.
Ireo spurs dia tsy maintsy alamina mifamatotra tsara amin'ny voditongotry ny baoty an'ny mpitaingina. Izy ireo dia tsy maintsy mifandray tanteraka amin'ny voditongotra tsy manery fa tsy mihetsika. Ny tsara indrindra dia tokony hijanona eo amoron'ny voditongotra izy ireo, miankina amin'ny karazana boot mazava. Ary avahao izay mandeha amin'ny tongotra tsirairay, havanana sy havia.
Zava-dehibe ny fahalalana ny fomba fanitsiana tsara ny tadiny sy ny fisafidianana ny habeny mety. Afaka mahita habe ho an'ny ankizy, ny tanora, ny vehivavy ary ny lehilahy isika. Saingy tsy midika izany fa ny baotin'ny vehivavy no mifanaraka tsara amin'ny baotin'ny vehivavy. Miankina amin'ny toerana hametrahantsika azy, ny halavan'ny spur ary ny tsirontsika. Ny tsara indrindra dia ny manatona ireo manam-pahaizana amin'ny magazay izay mandrisika ny habeny mifanaraka aminao indrindra.
Ahoana ny fampiasana azy ireo?
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, ny spurs dia azo ampiasaina amin'ny fifehezana equestrian rehetra. Ampiasao amin'ny soavaly, tsy maintsy manome fikitika fohy sy marina amin'ny lafin'ny biby isika. Ireo fikasihana ireo dia homena amin'ny voditongotra mba hampitomboana ny hafainganana, fihodinana na handroso.
Fampiasana tsara ny spurs, mahafantatra hatrany amin'ny fotoana fisainantsika (satria raha tezitra isika na sosotra dia mety hitarika antsika hampiasa tsy ara-dalàna azy ireo) ary ny fihetsika ataontsika dia mety ho fomba fifandraisana amin'ny biby. Fomba fifandraisana sy fandraisana valiny avy amin'ny soavaly amin'ny fomba mahomby kokoa. Tsy natao hanisy ratsy izany fa fanatsarana ny fahaizantsika mpitaingin-tsoavaly. Na izany aza, tadidinay fa ny fampiasana azy dia tsy ilaina amin'ny mitaingina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Karazana spurs sy ny fampiasana azy amin'ny soavaly
Federasiona Equestrian Espaniola: Fiandohana sy hetsika atao